Liva Andriamanantena · Avrily 2017 · Global Voices teny Malagasy
Liva Andriamanantena · Avrily, 2017
Nanomboka nandika tamin'ny 22 Marsa 2016 · 1839 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Liva Andriamanantena tamin'ny Avrily, 2017
Afrika Mainty20 Avrily 2017
Miampanga ny filohan'ny firenena izy ireo, ny hantsana ara-tantara sy mitranga ankehitriny , ary ny sampan-draharaha mpanadihady ny tahan'ny fampindram-bola manokana rehefa navarin'ny &P Global Ratings sy ny Fitch i Afrika Atsimo.
Manohy Ny Antsony Mba Hanaovan'i Etazonia Fizahana Ifotony ny Trosam-panjakana ny I Puerto Rico
Karaiba18 Avrily 2017
Nandevozina sy nendahina izahay. Mandà ny handoa ny trosa tsy anay izahay vahoakan 'i Puerto Rico. Tsy manaiky ampisafidianana na fanabeazana na fahasalamana izahay. Tsy ahena ny fisotroan-drononon'ireo zokiolona. Mitaky hetsika avy hatrany izahay.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana15 Avrily 2017
Rosia14 Avrily 2017
Eoropa Afovoany & Atsinanana13 Avrily 2017
Talohan'ny namoahana an'i Alexey Navalny tany am-ponja tamin'ny Alatsinainy, natao lohateny lehibe ny "fihetsiketsehan'ny mpianatra" nokarakaraina hanamaloka ny fiverenany hiseho vahoaka.